Wakaaladda Biyaha Biyaha Uureysa CW-08 soosaarayaasha iyo alaableyda | Biyaha nadiifka ah
pH (30% xalka biyaha): 2.0-5.0
Waxyaabaha adag% ≥: 50
CW-08 waa wax-ku-ool wax-ku-ool ah oo qurxinta leh oo leh hawlo badan sida qurxinta, qulqulka,Yaraynta COD iyo BOD.
Daabacaad iyo dheeh
1. Qalabayn adag (> 95%)
2.Awoodda ka saarista COD ee ka wanaagsan
3.Fiijiyeyn dhakhso leh, qulqulo wanaagsan
4.Aan wasakhda ahayn(malaha aluminium, koloriin, ions bir culus iwm)
Waxyaabaha adag% ≥
Fiiro gaar ah: Alaabtayada waxaa lagu sameyn karaa dalabkaaga gaarka ah.
1. Shayga waa in lagu qasi karaa 10-40 jeer oo biyo ah ka dibna si toos ah qashinka loogu shubayaa. Ka dib markii la qaso dhowr daqiiqo, waa la soo dejin karaa ama hawo ayaa la sabayn karaa si ay u noqdaan biyo nadiif ah.
3. Marka midabbada iyo CODcr ay aad u sarreeyaan, waxaa loo isticmaali karaa maadada loo yaqaan 'Polyalium Chloride', laakiin iskuma darka. Sidan oo kale, kharashka daaweynta ayaa ka hooseeya. Haddii Polyalium Chloride loo isticmaalo goor hore ama ka dib waxay kuxirantahay baaritaanka qulqulka iyo habka daaweynta.
1. Waa wax aan dhib lahayn, oo aan ololayn karin oo aan qarxin karin. Waa in lagu hayaa meel qabow.
2. Waxaa lagu buuxiyaa durbaano caag ah oo mid kasta oo ka kooban 30kg, 50kg, 250kg, 1000kg, 1250kg IBC taangi ama kuwa kale si waafaqsan shuruudahaaga.
Wax soo saarkani wuxuu u muuqan doonaa lakab ka dib kaydinta muddada-dheer ah, laakiin saameyntu ma saameyn doonto ka dib daalka
4.Kulka Heerkulka: 5-30 ° C.
Hore: Wakiilka Biyaha Sifeeya CW-05
Xiga: Poly DADMAC
Bakteeriyada U Adkaysata Heerkulka
Wakiilka Bakteeriyada Ka Saarida Saliida